Maxaan ugu jiraa BlogBurst? | Martech Zone
Waan hubaa in dulucdaydu aysan cidna ahayn, laakiin balooggeygu wuu sii socdaa. Mahadsanid Jim kuwaas oo xitaa isoo wacay anigoo ogsoon inaan u galay 4,000 ee ugu sareysa Technorati.
Laga soo bilaabo Blogburst: Ma heshay Blog aad u fiican? Haa, waxaan u maleynayaa inaan sameeyo.
Waxaan baloogyo sidaada oo kale ah u dhignay bogagga waaweyn ee warbaahinta. Maya… runti, maya.
Qofkasta oo wax natiijo ah ka hela adeeggan?
Febraayo 23, 2007 saacadu markay tahay 12: 53 AM
hambalyo ku saabsan jabinta heerka 4,000
Febraayo 23, 2007 saacadu markay tahay 8: 48 AM
Mahadsanid, Steven! Liiska Z-ga ayaa dib loo soo saaray, waxaan ka dhigay daboolka Netscape.com mid ka mid ah qoraalladayda oo anigu waan qareeyay a WordPress plugin. Saddexdaas ka mid ahi waxay heleen tan ka mid ah soo-gaadhista baloogyada oo runtii aniga darajooyinka kor u qaaday. Shaqooyin badan ayaa horyaala !!!
Feb 27, 2007 markay ahayd 1:14 PM
Blog Burst ayaa i diiday. 🙂
Feb 27, 2007 markay ahayd 1:47 PM
Kama walwalayo, engtech… maahan inay wax uun ii qabtaan!